HCI အကြောင်းမစခင်မှာ Applications အကြောင်းအရင်ပြောချင်ပါတယ်။ Digital Transformation ဘက်ကို ကူးပြောင်းလာကြတဲ့ခေတ်မှာ Business Applications တွေ အသုံးများလာတယ်။ Applications တွေကို စွမ်းဆောင်ရည်အား ကောင်းကောင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် အခြေခံ Hardware လိုအပ်ချက်တွေ များလာကြပါတယ်။ အရင်ကဆို Standalone Servers တွေသုံးပြီး Applications တွေ Run ကြတယ်။ CPU RAM တွေများတဲ့ Server တွေက ပိုပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကြတဲ့အတွက် ဒီလို Server တွေကို အသုံးမျ.းခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ Data တွေသိမ်းနိုင်ဖို့ Storage Device တွေလိုအပ်တဲ့အတွက် Storage Devices တွေနဲ့ ထပ်ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးကြတယ်။ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှု connections တွေအတွက် Network Device တွေနဲ့လည်း ထပ်ချိတ်ပြီး သုံးကြတယ်။ ဒါကတော့ ဟိုးအရင် Traditional ပုံစံပေါ့နော်။ အခုလက်ရှိအထိလည်း တော်တော်များများ Organizations တွေမှာ အခုထိ ဒီလိုပဲ သုံးနေကြပါတယ်။ ယခု အခါမှာ Hyper-Converged Infrastructure ဆိုတဲ့ နည်းပညာ တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
➡ Hyper-Converged Infrastructure ဆိုတာဘာလဲ?
Hyper-Converged Infrastructure (HCI) လို့ခေါ်တဲ့ Technology က အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ တစ်ကွဲစီဖြစ်နေတဲ့ Compute, Storage နဲ့ Network ကို တစ်စုတည်းဖြစ်အောင် ပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။ Device တစ်ခုထဲက Compute ရော၊ Storage ရော၊ Network ရော တစ်ခါထဲ ပါနေတဲ့ အတွက် တစ်ခုစီ ပြန်ပြီးပေါင်းနေစရာ ချိတ်ဆက်နေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ Single System တစ်ခုထဲကနေ Manage လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်း တစ်မျိုးဝယ်ရုံနဲ့ အကုန်ပါလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
➡ ဘာကြောင့် Organizations တွေက HCI ကို ပြောင်းပြီး သုံးလာကြလဲ?
✔ All-In-One ပုံစံဖြစ်နေခြင်းက IT Professionals များကို ဆွဲဆောင်နေပါတယ်။
✔ Infrastructure ကို ထိန်းသိမ်းရာမှာ Device အများကြီးကို Maintain လုပ်နေရတာမဟုတ်တဲ့အတွက် Maintenance Cost လည်းသက်သာမယ်။ အလုပ်ရှုပ်လည်း သက်သာစေတယ်။
✔ Operation လုပ်ရာတွင်လည်း အရမ်း ရိုးရှင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် Network ကျွမ်းကျင်တဲ့လူ၊ Storage ကျွမ်းကျင်တဲ့လူ အဲ့လို တစ်ယောက်ချင်းစီ ရှာနေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။
✔ နောက်တစ်ခုက Cost သက်သာ စေပါတယ်။ Device Cost တွေရော Maintenance Cost တွေရော သက်သာသွားမှာပါ။ x86 Server တွေမူတည်တဲ့ ဒီ HCI Server တွေကို အလွယ်တကူ အတိုးအလျှော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
✔ Business Agility ဖြစ်လာတဲ့ အပေါ်ကို မူတည်ပြီးတော့ နာရီ အနည်းငယ် အတွင်း ပြင်ဆင်မှုတွေ အချိန်တိုအတွင်းလုပ်လာနိုင်ပါတယ်။
➡ HCI Technology က ဘယ်လို အလုပ်လုပ်လဲ?
✔ Hyper-Converged Platform ပေါ်မှာ Compute, Storage နဲ့ Network တို့ကို Integrate လုပ်ထားပါတယ်။ Infrastructure ရဲ့ Management System ကိုလဲ Intelligence ဖြစ်ပြီး Automated ဖြစ်အောင် လုပ်ထားပါတယ်။ အသုံးပြုနေတဲ့ VM တွေ Resources တွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ HCI ရဲ့ Capacity ကိုရောက်သွားတာနဲ့ အလွယ်တကူ Scaling လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ HCI မှာ Compute, Storage နဲ့ Network ပေါင်းစည်းထားတဲ့ Nodes တွေရှိပါတယ်။ လိုအပ်လာပြီဆိုရင် ဒီ Nodes တွေကို အလွယ်တကူ ထပ်ထည့်နိုင်ခြင်းဖြင့် Scaling ကို လွယ်ကူစွာ ချဲ့ထွင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✔ HCI Technology ကို ထုတ်လုပ်တဲ့ Vendors များစွာရှိပါတယ်။ Vendors တွေဟာ စထုတ်ကတည်းက Data Protection ကိစ္စကိုပါ ထည့်စဉ်းစားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Storage Data တွေကို Mirroring လုပ်ထားခြင်း၊ Replication နည်းပညာတွေ ပါဝင်ခြင်း၊ Striping, Erasure Coding အစရှိသဖြင့် Data Protection တွေ ကို Provide ပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Bundled Software အနေနဲ့ Automation ပါဝင်ခြင်း၊ VM Migration လုပ်နိုင်ခြင်း၊ Load Balancing လုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့ Rolling Update လုပ်ခြင်းတို့ကိုလည်း Application တွေ တင် Run ထားတဲ့ VM များ Downtime မရှိဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
➡ HCI Technology ကဘာကြောင့် အရေးကြီးလာသလဲ?
✔ IT ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိမှာ ကွဲပြားစွာသုံးနေရတဲ့ Device တွေကို BOX တစ်ခုထဲမှာ အတူတကွ ပေါင်းစည်းသုံးလိုက်ရတဲ့ အတွက် Single Management ဖြစ်သွားခြင်း၊ Easily Deployed လုပ်နိုင်ခြင်းနှင် Simpler Operations with Best Performance ဖြစ်လာခြင်းစတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိလာပါတယ်။
✔ Business ဘက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင် Human Resources တွေချွေတာလာနိုင်ခြင်း၊ Hardware အမျိုးမျိုး ဝယ်စရာ မလိုတော့တဲ့ အတွက် Devices Cost တွေ သက်သာလာခြင်း နဲ့ Business ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ Data လုံခြုံမှုတွေ Business Agility ဖြစ်လာရာတွင်လဲ HCI Technology နှင့် ကောင်းစွာ အသုံးချလာနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
✔ Cisco မှ HCI Solution ဖြစ်တဲ့ Cisco HyperFlex Systems ကို HX Series အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ NEX4 Company အနေနဲ့ Customer ရဲ့ Requirement နဲ့ အညီ HX series အမျိုးမျိုးကို Solution Services ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ Cisco HCI က နဂို Cisco UCS Foundation နဲ့ Hybrid Cloud Management ကို ပေါင်းစပ်ပြီး Cisco HyperFlex ဆိုပြီး Product တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
➡ HyperFlex ရဲ့ Hardware Components Overview
✔ Hardware Overview ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Hybrid နှင့် All-Flash ရယ်လို၂မျို့းရှိပါတယ်။
✔ Cisco HyperFlex Hybrid Nodes တွေကို Models အားဖြင့် HX 220c/240c M4/M5 လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။
✔ ALL Flash Nodes တွေကို Models အားဖြင့် HX220c/240c AF M4/M5 ရယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
✔ Edge for Remote and Branch Offices အတွက် HX220c Edge M4/M5 ဆိုပြီး Models တွေ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
✔ Hybrid or All-Flash Data တွေအနေနဲ့ DataStore / Volume
✔ Hypervisor – Hypervisor အနေနဲ့တော့ VMware Hyper Visor ကို အသုံးပြုချင်လဲ Support ပေးပါတယ်။
✔ HX Controller VM(CVM) – သူကတော့ Local Storage ကို တိုက်ရိုက် Access ယူပြီး Assume လုပ်ပေးနိုင်တယ်။
✔ IO Visor Modules တွေကတော့ Input Output Stripes အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
✔ အသုံးပြုတဲ့ မိမိတို့ HyperVisor အပေါ်မှာ VM တွေကို တင် Run နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
➡ HyperFlex ရဲ့ Connectivity
✔ အရင် UCS Environment မှာ လိုပဲ HX Series တွေမှာလဲ Fabric Interconnects (FI) တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ FI-A နဲ့ FI-B ဆီကို HperFlex Nodes တွေက ချိတ်ဆက်ထားရတယ်။
✔ အနည်းဆုံး Nodes သုံးခုနဲ့ စတင်ရပါတယ်။ သုံးခုအနည်းဆုံးရှိရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Cluster လုပ်ပြီး အပျက်အစီးရှိခဲ့သော် ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။
✔ Node တစ်ခုချင်းဆီမှာ Management အတွက် vSwitch တစ်ခု၊ Storage Data အတွက် vSwitch တစ်ခု၊ VM Network အတွက် vSwitch တစ်ခုနဲ့ vMotion အတွက် vSwitch တစ်ခုစီ ခွဲထားပါတယ်။
✔ HX Controller ကတော့ Management နဲ့ Storage Data အတွက် Connection ရှိတယ်။
✔ HyperFlex မှာ Monitoring Solution လည်း ပါပြီးဖြစ်တယ်။ IOPS တွေ Latency တွေကိုလည်း အလွယ်တကူ Check နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
NEX4 Company မှလဲ HCI Technology နှင့်အတူ Cisco HyperFlex Devices တွေကို အသုံးပြုပြီး Customer တွေ အတွက် အကောင်းဆုံး Solution တွေ Services တွေပေးနေပါတယ်။‍‍‍